Meizu X8: ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည် SD710 ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည် Androidsis
တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအရအဆိုပါကုန်ပစ္စည်းကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်နေသည် Meizu 16 နှင့် 16 Proနောက်ထပ်အဆင့်မြင့်အရာနှစ်ခုသည်စျေးကွက်ကိုမကြာမီရောက်ရှိလာတော့မည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာအချို့နှင့်အတည်မပြုရသေးပါ။ အခုတော့ပြောင်းလဲသွားပုံရသည်။ လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဖော်ပြခဲ့သည့်ပထမ ဦး ဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းနှစ်လုံးမှအပ၊ သူတို့ဟာအခြား Meizu X8 ဖုန်းမှာအလုပ်လုပ်နေကြတယ်.
ဤကြေညာချက်ကိုကုမ္ပဏီ၏စီအီးအို Jack Wong ကတရားဝင် Meizu ဖိုရမ်မှပေးခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူက terminal ၏နာမကိုအကြောင်းပြောဆိုပေမယ့်လည်းထောက်ပြသည် အတူပါလိမ့်မယ် 710nm Snapdragon 10 SoC, Qualcomm မှနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံးချစ်ပ်ကိုအလယ်အလတ်တန်းစားအားအစွမ်းထက်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောပစ်မှတ်အဖြစ်ပစ်မှတ်ထားသည်။
ကတည်းကကတည်းက Meizu 16 Pro ကို X8 သည် Meizu 710 ကဲ့သို့ SD16 နှင့်အတူလာလိမ့်မည် ကွန်ယက်ကိုလှည့်ပတ်သွားကြောင်းဖော်ပြချက်အချို့အရဒီ terminal ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အင်အားအကောင်းဆုံး Qualcomm ပရိုဆက်ဆာ၊ တပ်ဆင်ထားမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ Snapdragon 845သေချာတာပေါ့။ ဒါ့အပြင်တစ် ဦး ယုတ်ညံ့မော်ဒယ်အတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, Meizu 8 နှင့်မတူဘဲ X16 တွင်လက်ဗွေရာဖတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ.
တူညီသောစီးရီးများမှအခြားယခင်မော်ဒယ်များမရှိပါကအဘယ်ကြောင့် Meizu X8?
သင်ကိုယ်တိုင်ဤမေးခွန်းကိုမေးပြီးပြီဖြစ်လိမ့်မည်။ X1, X2, X3 … X7 မော်ဒယ်မရှိသော်လည်း၊ ရှင်းပြချက်မှာ X စီးရီး MX စီးရီးအစားထိုး။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် MX စီးရီးအောက်မှနောက်ဆုံးထုတ်ဖုန်းသည် MX2016 ဖြစ်သည်။ Meizu သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က MX6 ကိုမထုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းသည် nomenclature ကိုတစ်နှစ်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းကြောင့် (၂၀၁၈) သည်ယခုနှစ် (M) X7 နှင့်အဘယ်ကြောင့်သွားနေသည်ကိုသဘောပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမည်၊ လက်တွေ့တွင်ဤစက်ပစ္စည်းသည် Meizu MX6 ၏နောက်ဆက်တွဲလေထုနှင့်ဆက်နွယ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Meizu X8: ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည် SD710 ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောကြားခဲ့သည်